१३औं सागः पहिलाे दिनमै को–काेले दिलाए नेपाललाई स्वर्ण? (नामसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
१३औं सागः पहिलाे दिनमै को–काेले दिलाए नेपाललाई स्वर्ण? (नामसहित)
नेपालमा कराँतेमा र तेक्वान्दोमा सात–सात वटा गरि कुल १४ स्वर्ण पदक जितेको छ ।
ट्रायथलनमा समेत ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेको नेपालले स्वर्ण पदकको सङ्ख्या १५ पुर्‍याएको छ ।
कराते (एकल काता)– मण्डेकाजी श्रेष्ठ
याे पनि पढ्नुस सागः आज कुन–कुन खेलमा लाग्दै छ स्वर्णको टुंगो?
कराते (टिम काता, महिला)– मण्डेकाजी श्रेष्ठ, महसुस तामाङ, प्रविण मानन्धर
कराते (५५ केजी)– लक्ष्मण तामाङ
कराते (५० केजी मूनि)– अनु अधिकारी
तेक्वान्दो पुम्से (२३–२९ वर्ष )– कमल श्रेष्ठ
याे पनि पढ्नुस सागमा भिड्ने नेपालका ५९४ खेलाडी (नामावली)
तेक्वान्दो पुम्से (२३ –२९ वर्ष )– पार्वती गुरुङ
तेक्वान्दो पुम्से (२९ वर्ष माथि )– आयशा शाक्य
तेक्वान्दो पुम्से (२९ वर्ष माथि )– आयशा शाक्य र सञ्जिकुमार पाण्डे
पुम्से महिला टिम (२३–२९ वर्ष)– निता गुरुङ, प्रशंसा क्षेत्री र शुसिला राई
ट्रायथलन– सोनी गुरुङ
कराते (एकल काता)– चन्चला दनुवार
तेक्वान्दो पुम्से (१७-२३ वर्ष)– कृष्णबहादुर तामाङ
तेक्वान्दो पुम्से (१७–२३ वर्ष)– अस्मिन राउत र सिना मादेन लिम्बु
तेक्वान्दो पुम्से (२३–२९ वर्ष )– जितबहादुर बोट र पार्वती गुरुङ
ट्रायथोलन– बसन्त थारु
ट्याग्स: साग, स्वर्ण